Akụkọ - Njirimara na nhazi ọkwa nke mbelata / ịchapu diski, oke nke ojiji nke ịkpụ.
Njirimara na nhazi nke ahihia ahihia / igbutu nkpuru, uzo nke ojiji ogwu.
Njirimara na nhazi ọkwa nke mbelata / ịchapu diski, oke nke ojiji nke ịkpụ ahịhịa:
Na ndụ kwa ụbọchị, ọ bụrụ na anyị a attentiona ntị na ya, a na-enwekarị usoro ịcha ihe na ịchọ mma ụlọ. Ọ na-egbutu ala, ọla, osisi, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ n’ụdị a chọrọ. Maka ụlọ ọrụ nhazi igwe, igwe nchacha igwe dị mkpa, kamakwa ụdị igwe nchacha nwere ike dị ugbu a. Ihe odide ya na-egbu osisi. Ihe siri ike nke ihe mpempe akwụkwọ na-egosi na ha dị na wiilị ụkwụ. Ihe kachasị ha bụ abrasive na resin resins. Isi ọrụ ha bụ ịkpụ nchara nkịtị, igwe anaghị agba nchara na ihe ndị na-abụghị nke nwere ike iji nweta mmetụta mbelata achọrọ. Ọdịdị ya bụ mpempe akwụkwọ dị larịị.
Cha mma agụba
Nhọrọ nke ihe ọkụkụ na-egbu egbu nwere njirimara nke ya, ọkachasị eriri fiber na resin. A na-eji ihe abụọ a eme ihe iji mee ka mmekọrịta dị ike. Ngwa ndị a gwụchara nwere ezigbo mma, ike mgbatị dị elu, nkwụsi ike na ịgbagọ ike. Ha na ọtụtụ-eji na mmepụta na blanking nke nkịtị ígwè, igwe anaghị agba nchara, metal na-abụghị metal. Nhọrọ nke ihe ndị magburu onwe ya na ọmarịcha teknụzụ na-eme ka arụmọrụ dị elu nke ịcha ihe na ihe ndị na-egbu ya.
Dị ka ihe onwunwe, ịcha diski na-tumadi kewara eriri resin ọnwụ iberibe na diamond ọnwụ iberibe.
1. A na-eji resin mee resin cut resde, jikọtara ya na ọtụtụ ihe dị iche iche. A na-ejikarị ya eme ihe na nchara alloy, igwe anaghị agba nchara na ihe ndị ọzọ siri ike, yana arụmọrụ ya dị oke mkpa. Mgbe ị na-egbutu ya, enwere ike kee ya ụzọ abụọ, gụnyere ịkpụ akọrọ na ịcha mmiri. Nke a na ụdị ịcha agụba nwere iji ọzọ mụ nkenke. Ọzọkwa, dịka mkpa nke ịkpụ, a na-ahọrọ ihe na ike nke mpempe ọnwụ, nke nwere ike ịme ka arụmọrụ mbelata ma chekwaa ego ahụ.
2. Diamond mbepu agụba. Nke a bụkwa ihe eji egbu egbu, nke enwere ike ịhụ ugboro ugboro na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ, yabụ, ụdị mpempe akwụkwọ a na-ejikarị eme ihe nke ihe siri ike na nke na-agbawa agbawa dịka okwute, ihe, okporo ụzọ ọhụrụ na nke ochie, seramiki, wdg. magburu onwe diamond ọnwụ agụba na tumadi ekewet nke akụkụ abụọ: mkpụrụ na cutter isi. Ihe ntaneti bu uzo na-akwado ya, nke a na-ejikwa kee onye na-egbutu ya, ebe ihe omimi diamond na-agbanye n'ime igwe n'ime onye isi cutter. A na-ejikarị onye na-egbutu ihe na usoro nke ịkpụ, n'ihi na a na-egbutu ya mgbe niile, ya mere, a ga-eri isi onye na-egbu ya, ma matrik ahụ agaghị enwe ọnwụ. N'ezie, onye na-egbu ihe na-ekere òkè n'ịkpụ n'ihi na o nwere diamond. Dayamọn bụ ihe kacha sie ike ugbu a. Ọ bụrụ na ọ na-ete ihe anyị kwesịrị ịkpụ n’isi cutter, ọ ga-egbutu ihe ahụ.